Samsung Galaxy Namoaka Ny Note 7 Phablet Afaka mamoha amin'ny masonao - News Fitsipika
Samsung Galaxy Namoaka Ny Note 7 Phablet Afaka mamoha amin'ny masonao
Koreana mpanamboatra finday avo lenta filokana any amin'ny avo-endri-javatra farany, curved vera sy Premium fitaovana mba manilika farany amin'ny phablet sokajy mpamorona
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Samsung Galaxy Namoaka Ny Note 7 phablet afaka hamaha amin'ny masonao” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alarobia 3 Aogositra 2016 07.30 UTC
Samsung Galaxy ny farany Note 7 phablet dia iray amin'ireo finday avo lenta sambo voalohany tamin'ny Iris scanner izay afaka mamaky ny masonao, ary aoka anao an-telefaonina ao amin'ny segondra.
Rehefa Namorona ny phablet in 2011 amin'ny tany am-boalohany Galaxy Note, Samsung no nifalihavanja ny Note 6 mba hitondra ny Note andalana ho amin'ny isa feh sy ny malaza Galaxy S7 tsipika.
Ny vaovao dia manasongadina ihany telefaonina avo-farany, Premium famolavolana ka hanao izay nanao ny Galaxy S7 Edge malaza, amin'ny mendrika sy mahavita tsara kokoa noho ny orinasa Koreana ny finday avo lenta hafa.
An infrared fitaovana fandefasam-peo sy ny mpandray ny Iris scanning hanatevin-daharana ny anoloan'ny-miatrika selfie fakan-tsary tao an-tampon-Galaxy Note 7. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Fa ny lehibe indrindra dia fivarotana endri-javatra vaovao ao biometric safidy ny endriky ny iray infrared Iris scanner izay maka segondra fotsiny mba hanorina sy hamaha ny telefaonina amin'ny fijery ny na maso. Tsy mbola manana tondro scanner ambanin'ny an-trano bokotra, izay solomaso-wearers dia hankasitraka Araka Izay Mety ho voatery hanaisotra ny solomaso na ny fifandraisana Mitovy amin'ilay family mbola hanao ny asa scanner Iris.
ny Note 7 mitovy ihany koa ny manasongadina fepetra arahana ho amin'ny Galaxy S7 Edge, anisan'izany ny manao izany IP68 ampy tantera-drano ny rano lalina ny 1.5m for 30 minitra, ny 12-megapixel fakan-tsary ao ambadika, 4GB ny RAM sy 64GB ny fitehirizana, amin'ny karatra microSD slot ho an'ny fanampiana bebe kokoa.
The Galaxy Note 7 no voalohany Samsung finday avo lenta ny fampiasana ny vaovao USB-C connector. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny kintana Fanamarihana 7 ny curved sisin'ny efijery hanaovanao azy narrowest iray amin'ireo finday amin'ny 5.7in efijery, izay midika fa be mora kokoa ny mihazona. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny phablet manana 5.7in QUAD HD efijery, USB-C, ary ny fampidirana S-penina penina, izay ankehitriny, tantera-drano ary hiasa raha ny varavarana lamba dia lenan'ny. Samsung ihany koa nanao ny varavarana lamba vonona ho avo ny vaovao isan-karazany mavitrika lahatsary fitsipika izay nanakodia avy manerana avo-end fahitalavitra, tohanan'ny afa-po avy amin'ny Amazon ny Prime lahatsary fanompoana, ankoatra ny hafa.
Samsung ihany koa nanao fanovana ny Note 7 ny Android 6.0.1 Marshmallow rindrambaiko, ao anatin'izany ny fahafahana miverina lahatsary ho gifs mivantana avy amin'ny efijery, ary isan-karazany hafa penina-mifandray fitaovana, ao anatin'izany ny fahafahana hosoratako amin'ny finday avo lenta ny lamba, rehefa izany mandry nefa tsy voatery hamoha azy.
Ny S-Pen penina manana 4,096 tsindry fahatsapana haavon'ny ary ankehitriny dia tantera-drano, miasa teo amin'ny efijery na dia lena – ny fampandrosoana izay nitondra Samsung telo taona mba hahatanteraka. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Galaxy Note 7 mizara ny voadio indray curved anoloana sy sisin'ny ny Galaxy S7 Edge, izay mahatonga azy hahatsapa Premium sy ergonomic eo an-tànan'ny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Fanamarihana 7 ny USB-C seranan-tsambo mitaky dika vaovao ny orinasa Gear VR headset, izay milaza Samsung efa reworked ho aina kokoa ny akanjo sy ny fampiasana. Ny vaovao ihany koa Gear VR manana seranana fanampin-javatra amin'ny lafiny sy revamped fanaraha-maso.
Samsung nilaza fa maherin'ny 1 tapitrisa mpampiasa ny isan-karazany ny Gear incarnations ny VR headset, amin'ny 500,000 amidy ao amin'ny Vondrona Eoropeana, izay mahatonga azy iray amin'ireo tsara indrindra-mivarotra VR headsets.
Samsung ny farany Gear VR headset no redesigned maso lavaka ho an'ny fitomboan'ny fampiononana sy streamlined fanaraha-maso. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Samsung dia voahidy ao amin'ny ady ho amin'ny farany ambony-toerana finday avo lenta amin'ny andohalambo mpifanandrina Apple, izay vao haingana ihany no nanomboka nivarotra phablets. Amin'ny maha-lehibe kokoa efijery finday avo lenta efa lasa bebe kokoa malaza – ny haingana indrindra any Eoropa fitomboan'ny ampahany – orinasa no Niady mafy mba hanavahana ny avo-priced phablets amin'ny asa maro avy any amin'ny mora vidy kokoa lehibe-hanakona finday avo lenta natao voalohany indrindra ho an'ny haino aman-jery fanjifàna.
Ny orinasa Koreana no manantena fa ny fifantohana amin'ny penina fiasan'ny, Premium fitaovana sy izany Knox fiarovana sehatra, izay mampiasa na tondro sy ny Iris skanera milaza ho iray amin'ireo tena azo antoka sy mora ampiasaina finday avo lenta misy, dia hamitahana ny mpanjifa avy mora safidy.
The Galaxy Note 7 dia ho hita ao amin'ny UK amin'ny 2 Septambra.
The Galaxy Note 7 tonga amin'ny telo loko, mainty, ny volafotsy / volamena loko sy ny fahazavana manjelanjelatra manga-bolamena lafiny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
34235	3 Android, Article, Gadgets, Finday, News, Phablets, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia, UK Teknolojia
← Zaza feno rongony? Ary ny dimy ny saritaka Indrindra Claims momba ny Atidoha Dyson 360 Eye Vacuum Review →